Isiqhelo esithandekayo kukuba kwindlela yokwenza imfesane yeentlobo zenkwenkwezi eziqhelekileyo zonyaka, iingubo zokutshata zomtshato ziye zatsho njalo. Kwaye oku kuyinyaniso, kuba iingubo ezinjalo azikhangeli kwimizekelo engaphezu kwekhulu leminyaka.
Namhlanje, nayiphi na imicimbi yomtshato yabantu abadumileyo abakwazi ukucingelwa ngaphandle komfanekiso womtshakazi e-chic kunye nengubo yomtshato. Iifoto zeengubo ezinjalo zomtshato zehlabathi ezityebileyo zihlotshisiwe kwi-Intanethi nakwiimpapasho zeempapasho ezicwecwe. Kodwa ukuze ukhanyise kwenye yeyona nto imnandi kakhulu yokugqoka imitshato yomtshato ngosuku olubaluleke kakhulu ebomini bakho, akufuneki ukuba ngumntu owaziwayo emhlabeni wonke. Kwanele ukuba ulandele imimiselo yefashoni kwaye uhlolisise ngobuchule zonke iimpazamo kunye nesidima sakho somfanekiso.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba iingubo ezimnandi kunye neengubo eziluhlaza zincinci kakhulu yamantombazana enokukhula okuphezulu, isibalo esincinci, isifuba esincinci kunye namagxa amancinci, kunye namaqhwa. Imodeli yamaRoma kunye nemigqomo emzimbeni kunye neengubo eziyimfuneko yinto efunekayo kubatshatileyo. Ukusuka kwintyatyambo, iimfesane ezimangalisayo zabatshatileyo zingaba nemisongo, imichilo, i-ruffles, i-frills, i-pleating, i-corrugations. Phakathi kweemodeli zakutshanje zokugqoka iimvatho, iimpahla zokugqoka ezine "skiron" skirts okanye ezo mifanekiso "ezihlotshisiwe entliziyweni" ngomzimba kunye neengubo kunye neentyantyambo zelinen zesiqhelo, iintsiba, amatye, njl njl. Ngendlela, inketho yokuqala, xa ukuhlobisa kwenziwa kwinqophiso yomtshato, kunconywa kubafazi abanamafuba amancinci, amahlombe amancinci kunye namaqabunga amancinci. Ikhetho lesibini ngezinto "zokunika" izinto ezikhethiweyo zikhethekileyo kubafazi abatyebileyo, abanomlenze onqabileyo kunye namaqatha amancinci.
Nantoni na into oyithethayo, kunye neengubo eziluhlaza kubatshati - kukukhetha okuhle, apho ungathi uzive njengendlovukazi yangempela. Into ephambili kukuba ukhethe iingubo ezingagxininisa ubuntu bakho.
Iimpahla ezimnandi kunye neziphathekayo ezinokhenketho kubatshati
Njengoko sithe satshilo, iimpahla zokutshata zomtshato ziye zathandwa iminyaka emininzi. Kwaye nangona kunjalo ukuba ngowokuqala kwimbali, ingubo ehle kakhulu kumyenikazi ngo-1840, uKumkanikazi waseVictoria, wagqithisa, ukutyhila ihlabathi lonke ubuhle bengubo. Okwangoku, abaqulunqi basebenze kanzima ukudala iimpahla zokutshata zomtshato, ngoko ke imimiselo yamasiko ininzi ifumene ukujonga entsha kunye nokuqala. Namhlanje, izambatho zomtshato eziqaqambileyo ngenxa yokungafani kwazo ziyakwazi ukunambitha kwiintsapho ezidinga kakhulu.
Izambatho zomtshato ezilungileyo kunye ezimnandi, ezinomkhonto omhle, zibandakanya ingubo yomtshato ephuma kwi-tulle, i-lace kunye ne-satin evela kwi-Valentino. Esi sigqoko se-chic sifaneleka abo baxabisa isitayela kunye nobuhle. Ingubo igqoke i-skirt ecebile kunye ne-lace inserts, eyongeza inkqubela ekhethekileyo. Ukunqunyulwa ngendlela yentliziyo kuhlotshiswe ngentambo, kwaye i-waistline igxininiswa ngumbhinqo wengubo ye-satin.
Iingubo ezivela kwi-guipure kunye ne-lace evela eHerms Bridal (eFransi) yayingekho. Ubuhle bobucwebe be-embroidery kwi-corset, i-lace, ibhanti evulekileyo, kungekhona zonke iintlobo zokubhena kweso sigqoko. Ukongezelela, i-guipure ngokwayo yinto enokuthi ithandeke ngokubonakala kwayo.
Akunjalo ngaphandle kwengubo yenkwenkwezi eyinkwenkwezi, owayengumdlaleli weqela elidumile "Spayz Gerlz" uVictoria Beckham. Ingubo yakhe yomtshato eyenziwe nge-satin enemibala yayigxininise ngaphezu kwexesha elilinganayo kunye neengubo ezintle kunye nezitayela eziza kubafazi abavela kulo lonke ihlabathi. Kwaye ukubulela ngale ngubo uVictoria uyanyanzelekile ukuba abe nguVera Wong, umyili owaziyo ngokwenene uyazi ukuba iingubo ezimnandi zomtshato zifanele ukuba ziphi. Kwaye oku akuthethi ngengubo yeVera Wong, elandelwayo ngo-"I-Sex kunye nesiXeko" yaboniswa nguSarah Jessica Parker. Ixesha elide, eliluhlaza, elinomoya kunye nokukhanya, ludlula konke okulindelekileyo. Ngako oko, zonke iimpawu zokutshata zomtshato ezivela kulo myili zingabonwa ngokukhuselekileyo kwinqanaba elona lihle kakhulu kwaye lihlelekile.
Kwakhona, asikwazanga ukuyihoxisa ukuqokelela kwento eyaziwayo kumtshakazi ngamnye, okuthi nguOksana Mukha. Izigqoko ezidityanisiweyo ezibandakanyiweyo kwiqoqo lakhe lika-2012 phantsi kwegama elithi "Deluxe" zaba libalaseleyo ngokwenene kulo nyaka!
Isivumelwano somtshato kunye neempawu zayo
Ukukhethwa kwezibingelelo ezilungileyo kunye nesifiso somtshato
Iimpawu zeseshoni yesithombe kumtshato webusika
Indoda enesandla esihle - ikhekhe "i-Zebra" etafileni yasekhaya
IArchetype ngumfanekiso oqhelekileyo womntu
Kanye emva koNyaka omtsha
Imikhwa enomdla kunye nemikhwa emibi
Sisiphi isipho onokumangalisa indoda yakho ethandekayo